Steve Wozniak anodzivirira kodzero yemahara kutsiva | Ndinobva mac
Steve Wozniak anodzivirira kodzero yekusununguka kutsiva
Toni Cortes | | dzakawanda
Steve Wozniak Izvo zvinopesana nemutemo waApple, uye anofunga kuti kambani inofanirwa kubheja pane yekugadzirisa kwemahara zvigadzirwa zvayo. Ndozvakataurwa nemubatanidzwa weApple mubvunzurudzo.
Asi hazvishamise. Kutanga, nekuti haana kubatana nekambani, uye anogona kupa maonero chero chaanoda. Uye chechipiri kuti welder inonyanya kukodzera benzi pane penzura, uye zvinonzwisiswa kuti anoda kudzivirira vese vadiki gadziridza vanoita raramo yavo pakati pezvikwiriso nemagetsi.
Mutemo weApple unopesana nekodzero yekugadzirisa mahara zvishandiso zvako. Mune chinzvimbo chakapesana zvachose, Steve Wozniak akataura muhurukuro yemaminitsi gumi nezve kukosha kwekodzero yekugadzirisa uye nemabatiro aakaita. apuro mukutanga kwawo.
Louis Rossmann Iye anozivikanwa nekurwira kwake kurwisa kuti apasise mutemo muUS iyo inofarira kugadziriswa kwemahara kwemagetsi zvigadzirwa Mune cameo ine Steve Wozniak, Rossmann akabvunza maonero ake nezvazvo. Wozniak akakumbira ruregerero achiti akabatikana zvikuru, uye haana kukwanisa kumubatsira muhondo yake, asi kuti ari kutsigira pfungwa yake yekuzvigadzirisa.
Akatsanangura kuti anonyanya kufarira kugadziriswa kwemahara uye yakavhurwa sosi yekuwana zvirongwa zvekugadzirisa zvemidziyo. Uye akapa semuenzaniso iyo Apple II.
Akatsanangura mubvunzurudzo kuti Apple II yakatumirwa kumushandisi ne schematics yakakwana yemaseketi ekugadzirisa zvinotevera kana zvichidikanwa nemushandisi iye pachake Akataura kuti chishandiso ndicho chega cheApple chinopa purofiti kwemakore gumi ekutanga ekambani.
Munguva yehupenyu hweApple II, ivo vakatengeswa kutenderedza 6 mamirioni mayunitsi. Kutsamwa panguva iyoyo. Tarisa vhidhiyo yeiyo bvunzurudzo, nekuti zvakakodzera kuteerera kune anecdotes anowanzo kutaurwa wekare Woz.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Steve Wozniak anodzivirira kodzero yekusununguka kutsiva
Spike email app inowedzera odhiyo uye vhidhiyo mafoni kune macOS
Buda paMacOS beta, Spotify paApple Watch, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac